Amazon Echo: Ny voalohany 13 Zavatra to Try - News Fitsipika
Alexa, Amazon ny virtoaly mpanampy, dia betsaka kokoa noho ny 3m US trano amin'ny alalan'ny ny Echo mpandahateny. Ary izany misy any Grande-Bretagne - nefa inona no attraction?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Amazon Echo: ny voalohany 13 zavatra mba hanandrana” dia nosoratan'i Darien Graham-Smith, fa ny Mpandinika ny Alahady 13 Novambra 2016 09.45 UTC
Ianaro ny fototra didy
Ny zavatra voalohany ianao te-hanao amin'ny vaovao Amazon Echo dia mianatra vitsivitsy feo fototra didy. Ka nanao hoe: "Alexa: Mijanòna!"Ho avy hatrany manafoana na inona na inona asa mitranga; mba hanao mozika mafy na mangina, hoe: "Alexa: Volume ny "na" Alexa: boky midina ". Afaka mitsambikina amin'ny boky manokana haavon'ny amin'ny hoe maromaro avy amin'ny iray amin'ny 10: "Alexa: boky iray "dia hiverina ny feo nidina ho any amin'ny bitsika, raha "Alexa: moana "no hampangina ny Echo tanteraka. Rehefa nahazo ny Hang ireo, ianao dia afaka manomboka amin'ny fanandramana sahisahy kokoa didy, soa aman-tsara any amin'ny fahalalana fa afaka manafoana na fahanginana foana izay asa tsy niriana.
Hanova ny fanairana teny
Angamba tsy tianao ny anarana Alexa - na angamba manana iray ao amin'ny fianakaviana izany anarany sy tsy te-hiteraka fikorontanana. Na ahoana na ahoana, dia afaka mora foana ny manova ny teny Echo mamaly. Mba hanaovana izany, sokafy ny Alexa fampiharana amin'ny finday avo lenta na tablette, mandeha any Fikirana, dia tsindrio eo amin'ny ny Echo sy tap hanova ny "Mifohaza teny". Ho hitanareo manana safidy telo: "Alexa", "Amazon" na "Echo" - mampalahelo, tsy afaka mifidy ny anaranao. Azonao atao ihany koa ny te miditra ao feo & fampahatsiahivana sy hahafahan'ny peo feedback - ny malemy fanahy "boop" - raha ny Echo mihaino ny anaran'i Alexa, ka fantatrao izany rehefa mihaino.
Related: veloma fiainana manokana, salama Alexa: eto no ho Amazon RuNet, ny an-trano milina izay mandre izany rehetra
Rohy ny kalandrie
Ny iray amin'ireo Echo mahasoa ny maro tetika dia ny fahafahana hilaza aminareo izay zava-nitranga sy ny fanendrena efa ho avy ny. Mba hampifandray ny Google kalandrie, fotsiny miditra ao toe-javatra ao amin'ny Alexa App, dia paompy kalandrie>Google kalandrie>mampifandray Google kalandrie kaonty. Miaraka nataony izany, dia afaka manontany fanontaniana tsotra toy ny: "Alexa, rehefa no manaraka fanendrena?", na "Alexa, inona no ataoko ny Asabotsy tolakandro?"Afaka mamorona zava-nitranga vaovao, koa. Fotsiny ho nampitandrina fa Alexa tsy manana hevitra momba ny fiainana manokana: raha misy miafina toerana fihaonan'ireo nanamarika teo ao amin'ny Google kalandrie, Aza gaga raha spills ny tsaramaso any amin'ny iray tia karokaroka fianakaviana.
Nanangana ny fifamoivoizana sy ny fanatanjahan-tena vaovao farany
Ny dingana setup Echo mandrisika anao mba hanome ny adiresy an-trano, Alexa ka afaka manolotra an-toerana avy hatrany Weather sy ny tati-baovao. Raha hilaza ny Echo izay miasa, dia afaka mahazo ny fifamoivoizana ihany koa ny tatitra ho an'ny niraharaha. Mba hanaovana izany, sokafy ny Alexa App, mandeha any Fikirana>fifamoivoizana sy ny paompy hiditra ny asanareo adiresy, miaraka misy mifanaraka waypoints teny an-dalana. Afaka manontany izao "Alexa, ahoana no fifamoivoizana?"Ho velona vaovao. Alexa dia afaka ihany koa ny mamaky anareo lohateny lehibe kokoa avy amin'ny anabavy boky, ny mpiambina: fotsiny afaka ny "fahaiza-manao" eo amin'ny Echo fampiharana, avy eo, ohatra, milaza: "Alexa, manontany ny mpiambina mba hanome ahy ny baolina kitra lohateny lehibe. "
Connect ny manan-tsaina an-trano fitaovana
Afaka mifehy ny Echo isan-karazany ny fitaovana an-trano mifandray, toy ny thermostats sy ny manan-tsaina jiro. Amin'ny toe-javatra sasany, mety hitaky anareo mba hampitaovana Alexa miaraka amin'ny vaovao "fahaiza-manao": hanao izany, any amin'ny fahaiza-manao>Sokajy>manan-tsaina an-trano sy ny fikarohana ho an'ny fitaovana. Raha vao ianao nanangana, lazao fotsiny Alexa mba "mahita fitaovana". Afaka dia hamoaka didy toy ny hoe "Alexa, nametraka ny akaniny ny mari-pana 20 mari "na" Alexa, miramirana ny efitra fatoriana mazava ". Under manan-tsaina an-trano>vondrona ianao ihany koa ny mahita ny fahafahana mamorona atao hoe vondrona ny fitaovana, ka afaka - ohatra - miverena ivelany rehetra jiro amin'ny na eny amin'ny iray didy.
Ny mahatonga izany Echo tena mora ny hanafatra entana avy any Amazon. Raha toa ka manana kaonty Prime Amazon Izay nanangana ho antokony iray-tsindry, dia afaka manampy feo fividianana ao anatin'ny App ny Alexa. Mba mametraka baiko, fotsiny hoe: "Alexa, mba Black Mirror amin'ny DVD "na" Alexa, levitra organika quinoa ", ary hanamarina ny fividianana, rehefa mamaky azy io Alexa miverina atỳ aminao. Azonao atao ihany koa ny manampy zavatra ny harona fa tatỳ aoriana famerenana. Raha manan-janaka ao an-trano dia mety ho hevitra tsara ny handao io endri-javatra niova eny, na izany aza: dia afaka hanorina efa-tarehimarika Pin, fa satria tsy maintsy milaza izany mafy ny fahefana ny hividy, dia mety tsy ho zava-miafina ny hijanona ela.
Afaka mampiasa ny Alexa mifehy ny akaniny manan-tsaina thermostat. Sary: Samuel Gibbs ny Observer
Connect ny Spotify kaonty
Raha toa ianao Prime ny Amazon mpikambana, dia afaka mangataka Alexa mba hilalao voafantina avy mihoatra ny 1m malaza Hits sy Playlists ao amin'ny Premier mozika mivantana fanompoana. Ny Echo koa dia afaka milalao hira avy amin'ny famakiam-boky mozika Amazon manokana - dia afaka mampakatra ny ho 250 mamantatra maimaim-poana. Raha manana Premium Spotify kaonty, ny Echo afaka hitanjozotra avy any koa: fotsiny mirohy izany ao amin'ny Alexa App eo ambanin'ny toe-javatra>mozika & haino aman-jery, dia hamoaka ny didy toy ny hoe "Alexa, milalao ao amin'ny Air anio hariva avy any Spotify ". Raha tsy te-mamaritra ny loharanom-baovao isaky ny, tap "Mifidiana toerana misy anao tolotra mozika", ary hifidy Spotify avy amin'ny sakafo izay miseho.
Ny fifantohana amin 'ny toerana tena radio
Ny Echo tsy manana mpandray FM, nefa mampiditra amin'ny TuneIn mba dia manome fahafahana hahazo ny be isan-karazany ny radio ny aterineto. Fotsiny hoe: "Alexa, milalao Radio 4 "na" Alexa, Misakana tanteraka milalao taona 80 "hihaino. Koa satria TuneIn dia Global fanompoana, misy midadasika lavitra isan-karazany ny toby mba misafidy avy noho ianareo Te hahazo amin'ny tapaka mpandray - nahoana raha miezaka WDDH in New York, na ny ABC Adelaide? Hahita ny lisitra feno ny toby ao amin'ny tunein.com. Azonao atao ihany koa ny mangataka Echo mba hilalao mozika avy amin'ny karazana manokana.
Alexa, lazao amiko ny tantara
Raha toa ianao mpankafy ny niteny teny, angamba ianao miorina ny trano famakiam-boky ny feo re audiobooks. Ary Echo mahay mitendry azy ireo ho anao: fotsiny hoe: "Alexa, milalao Fohy History of Time", ary mihevitra ny boky ao amin'ny tabataba re izay famakiam-boky, ny tantara dia hanomboka. Toy ny amin'ny mozika, dia afaka milaza Alexa mba hiato kely sy indray raha ilaina: "Hiverina" skips indray 30 segondra, raha "toko manaraka", ary "teo aloha toko hoe" asa rehefa Te manantena. Echo dia mety ela dia ho afaka hamaky boky Kindle avy koa, satria ny endri-javatra dia efa misy ny US mpampiasa. Ny lahateny dia tsy ho toy ny voajanahary toy ny matihanina mpilaza tantara, anefa, ary aza manantena azy hanao ny feo.
Haka ny ny pizza amin'ny alalan'ny fampiharana ny Just hanina, izay azo mifandray amin'ny Alexa. Sary: Just Mihinàna
Order ny takeaway
Skills mamela ny Echo mba interface tsara amin'ny tena-izao tontolo izao ny tolotra, Ary tsy mahazo kokoa noho ny tena izy JustEat. Rehefa efa napetraka ny fahaiza-manao (ary nampifandray izany ny Just hanina kaonty), dia afaka hanafatra sakafo hariva nefa tsy mba hampitraka ny rantsan-tànany. Mazava ho azy, tsy misy olona te-hihaino Alexa namaky avy sakafo iray manontolo, dia toy izany avokoa ankehitriny ny fanompoana dia voafetra ho hamerina baiko avy amin'ny tantara: mety hoe: "Alexa, mangataka fotsiny hohaniny, mba tsy reorder ny pizza "na" Alexa, mangataka fotsiny hohaniny, mba tsy reorder ramen ". Toy ny Amazon peo fividianana, misy na inona na inona mba tsy ny fanompoana avy ny fanararaotana ny tia karokaroka ny ankizy, fa angamba izay tsy mety ho olana lehibe ho an'ny tokan-tena ny olona, ​​inoana mikendry ny.
Miasa ny ny hatsembohana
Rehefa avy nihinana vitsivitsy efa takeaways, dia mety mila toerana ny fanatanjahan-tena. Alexa afaka manampy eto koa: iray amin'ireo endri-javatra malaza indrindra dia ny fito minitra workout, izay Alexa mitarika anao amin'ny alalan'ny fandaharana fohy ny fanazaran-tena ara-potoana, anisan'izany ny fitraitraiky ny jacks, gazety-dehibe sy ny rindrina mipetraka eo. Raha toa ka tsy azo antoka ny fomba misy fanazaran-tena tokony hatao, dia afaka mahita ny ao anatin'ny tsary ny tutorial App ny Alexa. Tsy misy arahina mozika - ticking fameram-potoana fotsiny feo - nefa afaka manomboka anao manokana ny filaharan-kira ka henoy izany mangina eo andamosiny. In hoavy, ny mpandraharaha mikasa ny hanitatra ny endri-javatra mba afaka manara-maso ny zava-bitany, ary hahazo fidirana amin'ny iray midadasika kokoa ny fanazaran-tena isan-karazany.
Related: Amazon nandefa feo Echo-maso mpandahateny sy Alexa mpanampy ao amin'ny UK
Ankafizo Lalao sy Paska atody
Ao ny fahaiza-manao trano famakiam-boky, ambany lalao, Trivia & Accessories, hahita am-polony ny lalao dia afaka milalao Alexa, anisan'izany ny ifandrimbonana Quizzes, bingo, ary na dia blackjack. Alexa afaka mihodina virtoaly dice ho anao koa - akory va ny lafiny maro - ary milalao ny lalao midika ny vatolampy, taratasy, hety. Raha izany tsotra loatra ho anao, izy koa dia afaka milalao ny be pitsiny kokoa "vatolampy, taratasy, hety, androngo, Spock "Variant. Raha tadiavinao atidohany kokoa tairina, manandrana fametrahana fanontaniana filozofika sasany, toy ny Dadabe Noely na misy na iza dia aoka ny alika avy. Alexa manana marani-tsaina be dia be ny valin-, ary izy no tena nahay filma, boky sy ny fandaharana ao amin'ny tele.
Expand sy Accessories
The Echo mandray tsy tapaka rindrambaiko upgrades: ho fantatra momba ny endri-javatra vaovao, mandeha any zavatra mba hanandrana>inona ny vaovao? ao amin'ny Alexa App. Tsy mendrika ihany koa hanisy fiheverana ny fahaiza-manao trano famakiam-boky, toy ny fahaiza-manao vaovao ireo dia nanampy ny fotoana rehetra. Ary raha te-hanitatra ny fandrakofana an-efitra hafa ao an-tranonao, Diniho mampiasa vola ao amin'ny Echo Dot - ny kely dikan-tenin'ny Echo niaritra £ 50 - na £ 250 ny fonosana enina. Manana ny fahaiza-manao ihany koa ho toy ny feno-salantsalany Echo, kely fotsiny amin'ny mpandahateny - ary raha tianao, dia afaka mampifandray ny ivelany mpandahateny amin'ny tariby na ny Bluetooth.
58860	10 Amazon.com, Article, Darien Graham-Smith, Discover, E-Commerce, Toetoetra, Internet, Internet-javatra, Observer New Review, Teknolojia, The New Review, ny Mpandinika, Voice fankatoavana
← Huawei Mate 9: Raha tena tianao ny 5.9in Phablet? Iza Windows Laptop Afaka Manolo ny MacBook Pro? →